एक महिनामा कतिपटक यौन चरम सुख ? अध्ययन यसो भन्छ Kasthamandap Daily
अझ रोचक कुरा त के भने यति धेरैपटक चरम आनन्द हासिल गर्ने महिलाहरुले कुनैपनि पुरुषसँग यौन सम्पर्क गरेका थिएनन् ।
उनीहरुले पुरुषसँग होइन महिला पार्टनरसँग नै सेक्स गरेका थिए । यो अध्ययनसँग जोडिएका केही रोचक नतिजा यस्ता छन्
शोधकर्ताहरुले ३ हजार महिलाहरुलाई २ फरक फरक समूहमा विभाजन गरे । पहिलो समूहमा मुख्य पार्टनर पुरुष भएका महिला थिए भने अर्को समूहमा महिला नै प्राइभरी पार्टनर भएका महिला थिए । त्यसपछि उनीहरुलाई कतिपटक चरम आनन्द प्राप्त गरिन्छ ? कतिपटक यौििनक्रडामा सहभागी भइन्छ ? कस्तो खाले यौनक्रिया मन पर्दछ ? भनेर प्रश्न गरियो । उनीहरुका यौन गतिविधि ४ हप्तासम्म निगरानी गरियो ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार महिला र पुरुषबीच हुने यौन सम्बन्धका क्रममा पुरुषहरुको ध्यान केवल आफ्नो यौनांग महिलाको यौनांगमा छिराउने कुरामा जाने र महिलाको चरम आनन्द पुरुषको प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ । त्यसैले पुरुषको चरम आनन्दलाई नै सेक्ससत्रको अन्त्य मानिन्छ र त्यसमा महिलालाई चरम आनन्द प्राप्त भयो भएन भन्ने कुरालाई महत्व दिइँदैन । एजेन्सीहरुको सहयोगमा